« Mibebaha: Ny tarehy ratsy no tsy azo ovàna fa ny toetra ratsy azo ovàna » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady Tsotra Faha-3B
Jon. 3, 1-5. 10 ; 1 Kor. 7, 29-31 ; Mk. 1, 14-20
Alahady tsotra fahatelo. Alahady isantarana ny fandinihana ny fiainan’i Jesoa Kristy niseho imasom-bahoaka taorian’ny fiomanany tamin’ny nandraisany ny batemin’i Joany sy nitokanany efapolo andro sy nalaina fanahy tany an-taniefitra. Alahadin’ny Tenin’Andriamanitra ihany koa ny Alahady tsotra fahatelo, araka ny toromariky ny Papa Fransoa hatramin’ny taona lasa (2020). Alahady hanamarihana manokana ny Fandraisana ny Tenin’Andriamanitra sy hanokafana bebe kokoa ny sehatra ahafahan’ny olona rehetra (lehilahy sy vehivavy) mamaky sy mankalaza ny Tenin’Andriamanitra …
« Tonga ny fotoana ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra… »: Izany no teny fanokafana ny Toriteny voalohany nataon’i Jesoa, araka ny evanjely nosoratan’i Md Marka. Fotoam-baovao no ambaran’i Jesoa. Tonga tokoa ankehitriny « ilay Fotoana » nifanaovan’Andriamanitra Ray tamin’ny olombelona hatramin’ny andron’i Adama sy Eva. Resin’ny fakam-panahy ka nanjakan’i Satana ireo ray aman-dreny voalohany. Tonga àry izao ilay Fotoana izay efa nampiomanan’Andriamanitra Ray ny olombelona tamin’ny tantaran’ireo razam-be, dia Abrahama, Isaaka, Jakoba, mba hanorenana Fanjakana vaovao handresy ny fanjakan’i Satana. Fotoana ihany koa izay efa nampiomanan’Andriamanitra Ray ny olombelona tamin’ny tantaran’ireo mpanjaka sy mpaminany teo amin’ny fanajakan’i Israely fahiny. Fanomanana « ilay fotoana » ireny tantara rehetra ireny fa ny fahatongavan’i Jesoa Kristy no tena fotoam-baovao hanorenana ny tena fanjakana dia ny Fanjakan’Ilay Andriamanitra Ray.
« Mibebaha ary minoa ny Evanjely » : Mitaky adidy sy andraikitra amin’ny olombelona anefa izany fotoanan’ny Fanjakan’Andriamanitra Ray izany. Mitaky fibebahana, fiovana, fihavaozana mifanentana amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Adidy sy andraikitra raisina voalohany ny mino. Tsy ny hoe « minoa fotsiny ihany » fa ny mino fa ilay lehilahy Jesoa avy any Nazareta no Kristy ilay « nandrasana » hatry ny ela. Adidy sy andraikitra ny miaina izany finoana izany amin’izao andro izao, indrindra manoloana ny savorovoro sy ny disadisa isan-karazany. Finoana iainana: Tsy finoana am-bava fotsiny fa finoana aseho amin’ny fiainana mifanaraka amin’ny Evanjely isan’andro. Tsy finoanoam-poana fa finoana ny teny voalazan’i Jesoa ao amin’ny Evanjely; finoana marina tokoa fa azo atao tsara ny mitia sy mifamela, eny fa na dia ny fahavalo aza; finoana fa ho avy ny farandro saingy tsy misy mahalala ny fotoana, eny fa na dia i Jesoa aza. Finoana iainana ny fiainana manaraka ny fomba amam-panaon’i Jesoa Kristy. Fiainana tahaka izay efa niainan’i Jesoa Kristy tety an-tany. Fiainana miantso fibebahana. Fibebahana tsy fialana amin’ny toetra ratsy fotsiny fa fibebahana tena fiovana fomba fiaina mihitsy.
« Andeha hanaraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo » : Santatr’ireo olona nibebaka sy nino ny Evanjely ireo mpianatra efatra mirahalahy nantsoin’i Jesoa. Mpanarato izy ireo. Niaina sy nivelona tamin’izany asa aman-draharahany izany isan’andro. Nahafantatra ny fahasarotan’ny fiainana. Nahalala ny savororovo sy ny adilahy politika tamin’izany andro izany. Niova fomba fiainana kosa anefa izy ireo nony nantsoin’i Jesoa : « Andeha hanaraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo ». Fanasana izany fa tsy an-tery. Fanasana miampy fampanantenana ihany koa anefa. Ary fampanantenana mitaky finoana fa hanao izany tokoa ilay mampanantena. Namaly ny fanasana tamin-kalalahana sy tamim-pinoana ireo mpanarato. Dia nandao ny haratony, ny fomba fiainana sy ny fisainana izy ireo, ka lasa nanaraka an’i Jesoa. Izany no tena fibebehana sy finoana ny Evanjely: vonona ny hanaraka an’i Jesoa sy hijery sy hianatra ny fomba fiainany.
« Rehefa afaka efapolo andro dia horavana i Niniva ». Tanteraka ao amin’i Jesoa ny fihetsika sy teny faminaniana nataon’i Jonasy (vakiteny voalohany) niantso fibebahana sy fiovan-toetra tao Niniva tanàna lehibe... Niova fo, niova fomba fiaina, nibebaka noho ny tenin’i Jonasy ny mponina tao Niniva. Ny tarehy ratsy aza ankehitriny efa azo ovàna fa vao mainka va fa ny toretra ratsy...
« Fohy ny andro … » Hoy ihany koa i Md Paoly amin’ny vakiteny faharoa anio hoe : « fohy ny andro, ka amin’izao sisa izao, aoka ny manam-bady ho toy ny tsy manana ; ny mitomany ho toy ny tsy mitomany ; ny mifaly ho toy ny tsy mifaly ; ny mividy ho toy ny tsy manana ; ny manararoatra ho toy ny tsy manararaotra ; fa mandalo ny endrik’izao tontolo izao ». Anisan’ireo olona nibebaka sy nino ny Evanjely ihany koa i Md Paoly. Nanana ny fomba fiainany izy teo aloha saingy niova tanteraka kosa ny fiainany nony nifanena tamin’i Jesoa izy teny an-dalana ho any Damasa…
« Jesoa Tompo ô ! Ny herin’ny teninao anie hanova ny fiainanay »